အဆိုပါ Marmaray အားလပ်ရက်, Metro အခမဲ့ Paid! min အဘယ်ကြောင့်နည်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အဆိုပါ Marmaray အားလပ်ရက်, Metro အခမဲ့ Paid! min အဘယ်ကြောင့်နည်း
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
အခမဲ့, အဆိုပါ Marmaray များအတွက်ပေးဆောင်ရစဉ်အပေါ်Hacıosman-Yenikapıခံရသောပွဲကနေအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့နှစ်ခုကိုအဓိကရထားလမ်း။ မျှတမှု Marmaray လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းYenikapı'danအထိပေးဆောင်ဖို့မြေအောက်ရထားကိုစီးနင်း Halkalı'' အခကြေးငွေသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းပေးဆောင်ခြင်းပြုလိမ့်မည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတ်လ 10 အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စည်ပင်သာယာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မနက်စောစော Al-Adha အခမဲ့ Binali Yildirim နှင့်သမ္မတအာဒိုဂန်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ဥက္ကဋ္ဌများအတွက် AKP ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေဖြင့် Halkalı-Gebz လိုင်းပေးဆောင်ရမည်နိုင်ငံသားများ၏တုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Sözcü Vurgun သတင်းစာ Fatmaအခမဲ့ 'ဆိုတဲ့မြို့တော်မြူနီစီပယ် IETT, Metrobus အားဖြင့် operated မုန့်ညက်သတင်းအစ္စတန်ဘူလ်, ဘတ်စ်ကား INC အပေါ်အနစ်နာခံ၏ပွဲစဉ်အတွင်း။ , ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကား, စီးတီး Lines ကူးတို့, အထူးပင်လယ်လမ်းကြောင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်များ, လမ်းရထား, ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာနှင့်မြေအောက်ရထားစီးအစ္စတန်ဘူလ်ကဒ်နှင့်အတူအားလုံးမှတ်တိုင်များ၏ yapabilirken ဖွင့်ပွဲကနေတစ်ဆင့် 10 တည်ရှိသောမတ်လတွင်ကျင်းပ Marmaray TCDD ပေးဆောင်ရမည်နိုင်ငံသားများ၏တုံ့ပြန်မှုစေ၏။
အပိုစွဲချက်များ Metro, Metro ONE အခမဲ့
HalkalıLevent သှားဖို့လိုခငျြသူတစ်ဦးခရီးသည် မှစ. Marmaray အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်အတူလွှဲပြောင်းနှုန်း 3.25 လစာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အများကြီးYenikapı TCDD Levent Metro အခမဲ့လာနိုငျစတင်ခဲ့သည်။ ကအခမဲ့သည်ဟုမထင်တဲ့သူ Marmaray နိုင်ငံသားများ, အလှည့်အတွက်လုပ်ခဖြတ်သောမျက်မှောက်မှာမိမိမိန်းမောတွေဝေမကွယ်နိုင်။
နိုင်ငံသားများအတွက် Marmaray များအတွက်ပေးဆောင်ခံရဖို့လူမှုမီဒီယာမှသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆို။
အစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကား, Metro Marmaray အခမဲ့ Minden အတွက် Bayram? အဆိုပါအနစ်နာခံ 2019 အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်မင်း၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ? 11 / 08 / 2019 အဆိုပြုချက်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်, အနစ်နာခံ၏ပွဲနှင့်အတူ 30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသငျသညျအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုငါပေးမည်။ IETT, နိုင်ငံသားများအတွက် IMM သားကောင်ဖြတ်တောက်ခြင်းဧရိယာများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေအချိန်စည်းရုံးလိမ့်မယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), နိုင်ငံသားများ၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာခံရသောပွဲဖြုန်းဖို့လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူခဲ့ပါတယ်။7/ 24 တာဝန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အဆိုးမြင်အတွေးတွေရှောင်ရှားရန်ယဇျပူဇျော IMM သင်း၏ပွဲခံစဉ်ကာလအတွင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများပွညျ့စုံစတင်ပါလိမ့်မယ်။ IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluအနစ်နာခံ၏ပွဲနှင့်အတူသြဂုတ်အောင်ပွဲခံနေ့အတွက်ဇူလိုင်လ 11 အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 30 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ၏ဥက္ကဋ္ဌနေရာစုဆောင်း ...
ဟယ်လိုအပေါ်အောင်မင်း Osmangazi တံတား Paid? 05 / 06 / 2019 Osmangazi တံတားကနေအကူးအပြောင်းပှဲမှာပေးဆောင်ခံရဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ Build - Operate - လွှဲပြောင်း (BOT စနစ်) Yavuz Sultan Selim တံတား (။3တံတား), အ Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်တံတား Osmangazi ချိတ်ဆက်နှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကနေအကူးအပြောင်းအတွက်မနက်စောစော Al-Fitr စဉ်အတွင်းတူညီသောလမ်းအတွက်ပေးဆောင်ခံရဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘယ်လို Osmangazi တံတားဖြတ်သန်းခ? အလင်းစီးပွားဖြစ်နှုန်း Yavuz Sultan Selim တံတားမည်မျှ tolls နှုန်း 103,05 xnumx.sınıfယာဉ်များနှုန်း 164,85 xnumx.sınıfယာဉ်များနှုန်း 72,15 xnumx.sınıfယာဉ်များနှုန်းအလင်းစီးပွားဖြစ်ယာဉ်များ3£မော်တော်ဆိုင်ကယ် 195,75 နှုန်းကား 4? ကားများ (Xnumx.köpr၏) 259,65 နှုန်းနှုန်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်5327,65 ယာဉ်များ ...
paid အစ္စတန်ဘူလ် Etiler, Esenyurt အခမဲ့အတွက် Metro Drive ကို 19 / 03 / 2018 IMM ကိုသမ္မတ Mevlut Uysal ကျနော်တို့မြေအောက်ရထားလမ်းကြောင်းပြီးနောက်စကားများစိစစ်ကြပါပြီ "ကျနော်တို့အများဆုံးမဲရရှိခဲ့ရှိရာမက်ထရို၌အကြှနျုပျတို့၏ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်" ဟုပြောသည်။ အဆိုပါရလဒ်: CHP, အ AKP ယခင်နေ့ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဝန်ဆောင်ခပိုမိုပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ် ... အဆိုပါ AKP Arnavutkoy ကွန်ဂရက်ခရိုင်, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal ယခုအချိန်တွင်မြေအောက်ရထားမှာသူ၏ "ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးလုပ်လေ၏။ ကျနော်တို့အများဆုံးမဲ "ကိုလက်ခံရရှိရှိရာမက်ထရို၌အကြှနျုပျတို့၏ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးမျက်စိအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်လှည့်မှတ်ချက်ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ETİLERသည်ဤစကားသူ Esenyurt ခရိုင် "Kirazlı-Başakşehirအတွက်မရောက်မီမြို့တော်ဝန် Kadir Topbas ဖြစ်ပါတယ်အစားရာ, အခမဲ့BAŞAKŞEHİRနိုင်ငံတော်သမ္မတ Mevlut Uysal ပေးသည် ...
အခုတော့ဒီနေရာမှာ Paid Marmaray Marmaray မြင်းစီးကြေးင် 13 / 11 / 2013 Marmaray Now ကိုဒီနေရာတွင် Marmaray'a မြင်းစီးအခကြေးငွေများ Paid: Marmaray အဆိုပါ Marmaray တာဝန်ခံ, ကျောင်းသားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းကယနေ့မရတဲ့ Marmaray ထံမှ 15 ရက်ပေါင်းücretleniyသည်မည်မျှအပြည့်အဝဈေးနှုန်း ... ဖွစျလိမျ့မညျကိုမည်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အရာကိုယနေ့ကနေအားသွင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်သူ၏အဖွင့် Marmaray Marmaray အတွက်ရက်ပေါင်းအခမဲ့အပြေးခဲ့သည် 15 ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Marmaray သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမြား၏အဖွင့်မှာ 29 အောက်တိုဘာလသမ္မတနိုင်ငံနေ့အခမဲ့ 15 နေ့ရက်ကာလအဘို့မရရှိနိုင်ခဲ့။ ယနေ့အဆုံးသတ်မှ 15 ရက်ပေါင်းအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ အဆိုပါ Marmaray ထံမှ 15 ကာလ၏အဆုံးမှာမနက်ဖြန်ပေးဆောင်လိမ့်မည်။ သန်း 4.5 ကျော်ကလူ 15 နေ့ရက်ကာလ၌အခမဲ့ကျမ်းပိုဒ်၏အားသာချက်ကိုယူ။ မနက်ဖြန်အစ္စတန်ဘူလ် Marmaray ကတ်ထဲကနေ ...
တူရကီ, ဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်ရထားအခမဲ့အားလပ်ရက်ကြလိမ့်မည် 06 / 09 / 2016 တူရကီ, ဘတ်စ်ကားများနှင့် Metro အတွက်အခမဲ့နေ့ Register လုပ်ဖို့ရှိသည်: တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, အထူးသဖြင့်အတ္တနှင့် AS ၏မြို့တော်, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်မနက်စောစောဖြုန်းဖို့အားလုံးယူနစ်အတွက်လိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူ။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, အထူးသဖြင့်အတ္တနှင့် AS ၏မြို့တော်, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်မနက်စောစောဖြုန်းဖို့အားလုံးယူနစ်အတွက်လိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူ။ အတ္တဘတ်စ်ကားနေဆဲအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ Başkentliler,7/ 24 153 တစ်ဦးတည်းဖွင့်လိုင်း, ရဲနှင့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထုတ်လွှင်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းတောင်းဆိုချက်များနှင့်တိုင်ကြားမှုများ, အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းတာဝန်အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ "ပွဲအခမဲ့ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်" ...
စီးတီးဘတ်စ်ကားနှင့် adanada အတွက် Metro အခမဲ့နေ့ 08 / 09 / 2016 စီးတီးဘတ်စ်ကားနှင့် Adana နှင့် Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် Metro အခမဲ့နေ့မနက်စောစောအယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအပေါငျးတို့သယူနစ်အတွက်ရှောက်သွားလိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူ။ Adana, ပှဲနေ့စဉ်အတွင်း4ဘတ်စ်ကားနှင့်မက်ထရိုကိုထပ်အခမဲ့ထံမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်။ ဧဝကနှင့်ပှဲ၏ပထမဦးဆုံးနေ့သင်္ချိုင်းမှအခမဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားပြုလိမ့်မည်။ နိုင်ငံသားများတောင်းဆိုနဲ့တစ်ယောက်တည်း 153 လိုင်းရဲနှင့်မီးသတ်သမား9တစ်ရက်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းတာဝန်အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်တိုင်ကြားမှုများတဆင့်ပို့။ မြို့တော်ရဲ့ခံရသောပွဲအချိန်ပို Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အနစ်နာခံ၏နေ့ပွဲတစ်လျှောက်လုံးကိုဆက်လက်ဦးမည်4ဘတ်စ်ကားနှင့် motrona အပေါ်အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ တိုင်းဘာသာရေးအဘို့ဆောင်သောပွဲလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ် ...
Adaray တောင်တက်ဖို့စတင် Paid 15 / 06 / 2013 Adaray တောင်တက်ဖို့ Paid Sakarya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမြို့ပြရထားစနစ် (ADARAY) စတင်, 17 တနင်္လာနေ့ပုံမှန်အချိန်ဇွန်လမှစတင်ပါလိမ့်မယ်။ adaray တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စမတ်ကဒ်လျှောက်လွှာ (ကတ် 54) တွင်တရားဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Adapazari Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့် - Arifiye အတွင်းစိတ်-မြို့ရထားစနစ် (ADARAY) တွင်အကောင်အထည်ဖော်, တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 17 သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ပေါ်ကစတင်ခဲ့သည်။ မေလ adaray တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စမတ်ကဒ်လျှောက်လွှာ (ကတ် 27) ရက်နေ့တွင်အခမဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားထံမှ 54 တရားဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 1.25 တိုတောင်းသောအကွာအဝေးစွဲချက်နှုန်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဘတ်စ်ကားတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ ADARAY အပြည့်အဝခ။ adaray ခုနှစ်, ကျောင်းသားများ, 69 ရာခိုင်နှုန်းကိုအတားအဆီးသည်အထိ ...
ဓါတ်ရထား 65 အကြီးတန်းနိုင်ငံသား Samsun အတွက်ခရီးသည်မှပေးဆောင်ဖြစ်လာ 15 / 01 / 2015 ဓါတ်ရထား 65 အကြီးတန်းနိုင်ငံသား 2015 Samsun နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ကျော် 1 အတွက်ပေါင်းစပ်2အစီအစဉ်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ပိုင်ဆိုင်ဇန်နဝါရီလ xnumx'inc အတွက် 12 တစ်နှစ် Samsun Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံတွင်ခရီးသည်မှ Going အားသွင်းပြီးစွန့်ပစ်ကမောက်ကမတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်း Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Turan Cakir ၏ဥက္ကဋ္ဌနေရာအောက်ရှိ session ရဲ့ 65 2015 အစီအစဉ်ကို item, မြို့တော်စည်ပင်သာယာညီလာခံ၏ 1 နှစ်ပေါင်း xnumx'inc ပေါင်းစပ်ခြင်း, ကော်မရှင်ကနေတဆင့်ကောင်စီရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါညီလာခံခန်းမ2ကိစ္စမှာကျင်းပတဲ့ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာ Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စည်းဝေးပွဲခန်းမဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာနသမိုင်းဝင်ဇန်နဝါရီလ 12 12 ရှိပြီး ...
Yenimahalle-Şentepe Cable ကိုကားလိုင်း Now ကိုအားသွင်းနေပါသည် 09 / 01 / 2017 Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်လ်ကားလိုင်းယခုကောက်ခံ: တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အရာရှိများ, Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်လ်ကားလိုင်းအတွက် 2014 နှစ်ပေါင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအနေဖြင့်အဖြစ်အခမဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, ခရီးသည် 1 TL မှာပြောင်းရွေ့ပါလိမ့်မည်အဖြစ်ပေးဆောင်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ အောင်အတွက်အရေးအပါဆုံးအချက်တစ်ချက်သူတို့ဟာသူတို့တစ်တွေကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီးနိုင်ကဆိုသည်ကြားတွင်Şentepe-Yenimahalle နှုန်း 1 ပေးဆောင်နေဖြင့်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းကြောင့်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့ဝယ်လိုအားကဒီဦးတည်လာမယ့်အားဖြင့်ရည်မှန်းချက်အပြင်ဘက်ကိုအသုံးပြုထားကြောင်းဖို့ဒေသ၏လူဦးထံမှပြည်သူပြည်သားအချို့မှတ်တမ်းတင်၏ cableway သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အာဏာပိုင်များအသစ် applications များနှင့်အတူခရီးသည်ပေးဆောင်။ မက်ထရိုအားဖြင့်မိမိတို့၏ခရီးအားဆက်လက်လွှဲပြောင်းခရီးသည်၏အမှု၌ Yenimahalle မီထရိုဘူတာရုံအောင်အရာရှိများ, cable ကိုကားတစ်စီးများအတွက်လက်မှတ်ကြေးပေးထား 1 TL ထေ ...
Changed Paid နှစ်ပတ်လည်ခွင့်စည်းမျဉ်းများ, 19 / 08 / 2017 paid နှစ်ပတ်လည်ခွင့်စည်းမျဉ်းများ၏တရားဝင်ပြန်တမ်းအားဖြင့်ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ရက်စွဲပါသြဂုတ်လ 18 2017 နှင့် 30158 နီးကပ်စွာနှစ်ပတ်လည်ခွင့်ကိုရည်မှတ်စည်းမျဉ်းများအတွက်တရားဝင်ပြန်တမ်းအမှတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအပြောင်းအလဲများအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ဝေနှစ်စဉ်ပေးဆောင်ခွင့်စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲရန်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့တရားဝင်ကြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ဝေစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ paid နှစ်ပတ်လည်ခွင့်၏6။ ဆောင်းပါး၏တတိယအပိုဒ်တွင်တည်ရှိပြီး "သုံးဦးရေအများဆုံးခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ " "ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုကဏ္ဍများ။ " ပြောင်းလဲသွားတယ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါတရားဝင်ပြန်တမ်းနှစ်ပတ်လည်အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစည်းမျဉ်းသုံးခုထက်မပိုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်အလိုရှိသောအဖြစ်ပြင်ဆင်မှုမရှိတော့ပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီလစာနှင့်အတူနှစ်စဉ်ခွင့် Paid ။ နှစ်စဉ်စွဲချက် ...
အစ္စတန်ဘူလ် Card ကို
စီးတီး Lines ကူးတို့များ
Paid Marmaray သည် Mi နေ့
paid အစ္စတန်ဘူလ် Etiler, Esenyurt အခမဲ့အတွက် Metro Drive ကို
အခုတော့ဒီနေရာမှာ Paid Marmaray Marmaray မြင်းစီးကြေးင်
စီးတီးဘတ်စ်ကားနှင့် adanada အတွက် Metro အခမဲ့နေ့
Adaray တောင်တက်ဖို့စတင် Paid
ဓါတ်ရထား 65 အကြီးတန်းနိုင်ငံသား Samsun အတွက်ခရီးသည်မှပေးဆောင်ဖြစ်လာ
Yenimahalle-Şentepe Cable ကိုကားလိုင်း Now ကိုအားသွင်းနေပါသည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (284) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (619) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (518) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (665) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)